Jaobily volafotsy 1989 - 2014 ny mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle - asabotsy 29 novembra 2014
Ny Mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle mivady / www.madaplus.info
Ho an’ny Filoha mivady sy ny Biraon’ny Synodamparitany Vato Fehizoro Ampitandranomasina 37
Ny Mpitandrina sy ny Fiangonana rehetra miray amin’ny Synodamparitany Lah.37
Ny Komity nanomana sy nikarakara ny Jobily faha-25 taona
Ny Sampana rehetra ato anatin’ny Synodamparitany Lah.37 sy ny Sampana rehetra isam-pitandremana
Ny Fiangonana rahavavy sy ny fikambanana samihafa nisoloanareo tena Ny kristiana rehetra tsy an-kanavaka sy ny isam-batan’olona izay tsy ho voatonona araka ny anaranareo avy
Ho aminareo mandrakariva anie ny Fahasoavana sy ny Fiadanan’i Jesoa Tompo.
Amin’ny anaranay mpitandrina RAFALINIRINA Lalao Angèle mivady no hanoratanay izao taratasy fisaorana sy fankasitrahana izao.
Feno fisaorana sy fankasitrahana an’Andriamanitra izahay noho ny fahatanterahan’ny fotoan-jobily omaly 29 novambra 2014.
Tsy hainay ny hangina tsy hisaotra sy hankasitraka anareo Filoha mivady sy ny Biraon’ny Synodamparitany, ianareo mpitandrina sy ny fitandremana entinareo avy, ianareo mpitandrina mpiara-miasa rehetra, ianareo Komity nanomana iny fotoana iny, ianareo Sampana rehetra ato anatin’ny Synodamparitany, ianareo Sampana sy mpihira rehetra isam-pitandremana izay tsy ho voatonona araka ny anaranareo avy, ianareo Fiangonana rahavavy sy fikambanana samihafa , ianareo kristiana tsy an-kanavaka, ny namana sy tapaka rehetra.
Mankasitraka sy mankatelina indrindra ry havana noho ny fitiavana nasehonareo ka nahatongavanareo niara-nanome Voninahitra an’Andriamanitra tamin’iny fotoana omaly iny, mankatelina indrindra anareo izay tsy afaka noho ny antony samihafa nefa nitondra tamim-bavaka ny fotoana sy izahay mpitandrina mivady.
Fantatray ny fitiavana nasehonareo ho Voninahitr’Andriamanitra, ary tsy nitandro hasasarana, vola aman-karena, fitaovana sy fampitaovana, nandany fotoana ianareo ka nahatanteraka nyfisaorana an’Andriamanitra omaly iny, na tamin’ny fanontronana na tamin’ny fitondrana amim-bavaka.
Mankasitraka indrindra ry havana, ary amin’ny maha-olombelona izay mety nisy ny nahakivy anareo, dia tsy navelanareo tsy ho tanteraka ny fotoana rehetra, izany koa anefa dia tsy hanakana ny fiombonantsika mianakavy amin’ ny finoana sy ho Voninahitr’Andriamanitra.Tsy nijery ny olàna sy ny zava-manahirana ianareo, fa nataonareo ho zava-dehibe ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny Tompo sy izahay izay nanokanana iny fotoana iny.
Tsy hainay ny hangina tsy hankasitraka anareo manokana noho ny ezaka rehetra izay natao. Raha izahay dia tsy ho voavalinay ny nataonareo, ary toy ny tsy hahavaly fitia toa zaza aza izahay, kanefa dia ny Tompon’ny zavatra rehetra no hamaly anareo noho ny fitiavana nasehonareo, satria tsy noho ny aminay ihany no nanaovanareo ireo ezaka rehetra ireo fa noho ny Voninahitr’Andriamanitra.
‘‘Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina ka hanadino ny asanareo sy ny fitiavana nasehonareo ho Voninahitry ny Anarany,…’’ Hebreo 6.10
Mankasitraka sy mankatelina tompoko. Nataonay bango tokana ihany ny fisaorana anareo rehetra tsy an-kanavaka izay tsy ho voatonona araka ny anaranareo avy, ary mba tsy hisian’ny fanadinoana rahateo.
Tsy ny zava-manahirana no asandratsika, fa ny fifankatiavantsika rehetra sy ny fiombonantsika ary ny fanomezana Vonianhitra an’Andriamanitra.
Ho aminareo lalandava anie ny Fiadanana.
Ny mpitandrina Rafalinirina Lalao Angèle mivady
Ho avy tsy ho ela ny sary ny Jobily.